फेसबुकको सेयरमूल्यमा उछाल, बजार पुँजीकरण पहिलोपटक १ लाख करोड डलर माथि
काठमाण्डौ । सेयरमूल्यमा उछाल आएसँगै दिग्गज सोसल मिडिया कम्पनी फेसबुकको बजार पुँजीकरणले सोमबार १ लाख करोड डलर पार गरेको छ। फेसबुकको बजार पुँजीकरण पहिलोपटक १ लाख करोड डलर माथि पुगेको हो। यसअघि एप्पल, माइक्रोसफ्ट, अमेजन र गुगगको कुल बजार पुँजीकरण १ लाख करोड डलर पुगिसकेको छ। बजार पुँजीकरण १ लाख करोड डलर पार गर्ने फेसबुक पाँचौँ कम्पनी...
काठमाण्डौ । यदि तपाइँ सामाजिक सञ्जाल फेसबुक प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने यो खबरले चकित पर्न सक्नुहुन्छ। हालै सार्वजनिक एक खबरअनुसार ठूलो संख्यामा फेसबुक प्रयोगकर्ताको गोप्य विवरण चुहावट भएको छ। बिजनेस इन्साइडर वेबसाइडका अनुसार विश्वभरका करिब १०६ देशका ५० करोड प्रयोगकर्ताको गोप्य विवरण एउटा ह्याकरले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको...
अस्ट्रेलियामा फेसबुक र गुगलले सञ्चारमाध्यमका समाचार प्रयोग गरेबापत प्रकाशकलाई शुल्क तिर्नुपर्ने
काठमाण्डौ । अस्ट्रेलियाले गुगल र फेसबुकजस्ता संस्थाले सञ्चारमाध्यमको समाचार प्रयोग गरेबापत प्रकाशकलाई शुल्क तिर्नुपर्ने कानुन पारित गरेको छ। यस्तो खालको यो संसारकै पहिलो कानुन भएको बताइएको छ। अमेरिकी प्रविधि संस्थाहरूले यो कानुनको विरोध गरेका थिए। गएको साता फेसबुकले यो कानुनका कारण अस्ट्रेलियाका सबै समाचार बन्द गरेको थियो तर...
काठमाण्डौ । अमेरिकी संसद् भवनमा हमला गर्ने समर्थकका पक्षमा ट्विटहरू गरेपछि ट्विटरले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको खातालाई नयाँ ट्विट गर्ने नमिल्ने गरी १२ घण्टाको प्रतिबन्ध लगाएको छ। आफ्ना ट्विटहरूमार्फत ट्रम्पले ती समर्थकहरूलाई घर जान भन्नुअघि 'आइ लभ यू' लेखेका थिए। ट्रम्पका तीन वटा ट्विटले आफ्नो नीतिको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको...
फेसबुकले साना कारोबारीका लागि ल्यायो १० करोड डलरको अनुदान कार्यक्रम, कसले पाउँछ ?
काठमाण्डौ । दिग्गज सोसल मिडिया कम्पनी फेसबुकले कोरोना संकटका कारण प्रभावित विश्वभरका साना कारोबारीहरुका लागि अनुदान कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले त्यस्ता साना कारोबारीहरुका लागि १० करोड डलरको अनुदान कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। यो अनुदान कार्यक्रम ३० भन्दा बढी देशहरुमा चलाइने र त्यसबाट करिब ३० हजार कारोबारीहरुलाई सहयोग...
गलत सूचनामाथि फेसबुकको अंकुश, म्यासेज फरवार्डमा संकुचन
काठमाण्डौ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म फेसबुकले पनि अब गलत जानकारी दिने म्यासेजमाथि रोक लगाउन प्रयास थालेको छ। यसका लागि फेसबुकले म्यासेन्जर च्याटमा केही बदलाव गरेको छ। अब ह्वाट्सएपजस्तै म्यासेन्जरमा पनि फरवार्ड हुने म्यासेजको सीमा तोकिएको छ। अर्थात अब एकपटकमा फरवार्ड गरिएको म्यासेजलाई ५ जना प्रयोगकर्ता वा गुप्रमा पठाउन स...
काठमाण्डौ । कोरोना महामारीको समयमा धेरैजसो कम्पनीहरुले आफ्ना कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्ने वातावरण अर्थात ‘वर्क फर्म होम’ को सुविधा प्रदान गरिरहेका छन्। यी कम्पनीहरुमा फेसबुक पनि समावेश छ। दिग्गज कम्पनी फेसबुकले पनि जुलाई २०२१ सम्म आफ्ना सबै कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्ने छुट दिएको छ। यतिमात्रै नभई फेसबुकले आफ्नो टिमलाई १ हजार...
काठमाण्डौ । नयाँ सर्ट भिडियो फिचर लन्च गरेपछि फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा बढोत्तरी भएको छ। टिकटकलाई अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाइने भएपछि बुधबार फेसबुकले अमेरिकी ग्राहकका लागि सर्ट भिडियो फिचर भएको इन्स्ट्राग्राम रिल ल्याउने घोषणा गरेको थियो। यो घोषणापछि मार्क जुकरबर्गको व्यक्तिगत सम्पत्ति वृद्धि भएर १००...
काठमाण्डौ । भ्रम फैलाएको भन्दै फेसबुकले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एउटा भिडियो पोस्ट डिलिट गरिदिएको छ। कोरोनाभाइरसम्बन्धी ट्रम्पको उक्त पोस्ट फेसबुकले पहिलोपटक डिलिट गरेको हो। राष्ट्रपति ट्रम्पको पोस्टमा गलत सूचना प्रवाह गरिएका कारण यो नियमितविपरीत रहेकोले डिलिट गरिएको फेसबुकले जनाएको छ। ट्रम्पले फेसबुकमा फोक्स...
फेसबुकले हटायो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको विज्ञापन, किन ?
काठमाण्डौ । अपमानजनक चिह्न प्रयोग गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावी अभियानसँग सम्बन्धित एउटा विज्ञापनलाई हटाइदिएको छ। फेसबुकका अनुसार उक्त विज्ञापनमा उल्टो रातो त्रिकोण प्रयोग गरिएको छ जुन जर्मनीमा नाजीहरूले कम्युनिस्ट लगायतका आफ्ना विपक्षीहरूको वर्णन गर्न प्रयोग गर्थे। ट्रम्पको...
काठमाण्डौ । विश्वभरी अत्यधिक प्रयोग हुँदै आएको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले नयाँ सुविधा थप गरेको छ। गत अप्रिलदेखि अमेरिका र क्यानडामा शुरु गरेको नयाँ सुविधा फेसबुकले अहिले भने विश्वभरीकै लागि खुल्ला गरेको जनाएको छ। अमेरिका र क्यानडाका प्रयोगकर्ताहरूको टिप्पणी र सुझावका आधारमा सुधार गरेर फेसबुकले यो सेवा विश्वव्यापी गरेको हो। नयाँ...
फेसबुकले ५०% कर्मचारीलाई अझै ५–१० वर्षसम्म ‘वर्क फ्रम होम’ कै अनुमति दिने
काठमाण्डौ। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सोसल मिडिया कम्पनी फेसबुकले कोरोनाभाइरसका कारण घरमै बसेर काम गर्ने रणनीति (वर्क फ्रम होम पोलिसी) लाई समर्थन गरेको छ। कम्पनीका सीईओ मार्क जुकरबर्गले आफ्नो कम्पनीका ५० प्रतिशत कर्मचारी अझै ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म वर्क फ्रम होम गर्ने बताएका छन्। उनले कम्पनीले यो निर्णय कर्मचारीको सुरक्षालाई ध्यानमा...
काठमाण्डौ । आज लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल ‘फेसबुक’ संस्थापक मार्क जुकरबर्गको जन्म दिन। सन् १९८४ मे १४ मा उनको जन्म भएको थियो। मार्क जुनकरबर्ग अहिले एक सफल अमेरिकी उद्यमी र सामाजिक सञ्जाल ‘फेसबुक’ का संस्थापकका रुपमा विश्व प्रख्यात छन्। यो कायमबायी उनले कसरी हासिल गरे ? जानौँ। प्रविधिमा लगाव हरेक मानिसमा कुनै न कुनै चिजप्रति विशेष...
काठमाण्डौ । कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण विश्वको ठूलो हिस्सा अहिले लकडाउनमा छ। आम्दानी नहुँदा उपभोक्ता खर्च गर्न सकिरहेका छैनन्। उद्योगधन्दा धरासायी बनेका छन्। केही टेक्नोलोजी क्षेत्रका ठूला कम्पनीलाई भने यो विश्व महामारीको सामान्य असर पनि नपरेजस्तो देखिएको छ। यो संकटपछि ती कम्पनी झनै चम्किने पक्काजस्तै भएको छ। पछिल्लो केही...
फेसबुक–जियो डिल : ज्याक मालाई पछि पार्दै मुकेश अम्बानी बने एसियाकै धनी व्यक्ति
काठमाण्डौ । फेसबुक र जियोबीचको डिलपछि रिलायन्स इन्डस्ट्रिज लिमिटेडका अध्यक्ष मुकेश अम्बानी एसियाकै धनाढ्य व्यक्ति बन्न सफल भएका छन्। रिलायन्सको जियो प्लेटफम्र्स र फेसबुकबीच डिल पक्का भएपछि अम्बानी एसियाकै सबैभन्दा धनको सूचीमा अग्रस्थानमा पुग्न सफल भएका हुन्। फेसबुकले जियाको ९.९९ प्रतिशत हिस्सा किन्ने डिल भएको छ। अब फेसबुकले भारु...